petmeds maka nkịta ndị na -emepụta nkịta, ndị na -ebunye ya - China petmeds maka nkịta nkịta ụlọ ọrụ
Fipronil 10% dropper
Maka ọgwụgwọ na mgbochi mkpịrị na akọrọ. Ịnwale na ịchịkwa akpịrị akpịrị na akọrọ dermatitis na nkịta. Fipronil 10% dropper maka Nkịta na nwamba na -enye ọnyà ngwa ngwa, dị irè ma dịkwa mma yana ịchịkwa fleas, akọrọ (gụnyere akara mkpọnwụ) na ịta ata na nkịta na nwamba na nwa nkịta ma ọ bụ nwa 8 izu ma ọ bụ karịa. Ntuziaka maka iji gbuo igwu. ọkwa niile nke akọrọ nkịta na -acha nchara nchara, akọrọ nkịta America, akọrọ ọnụ ọgụgụ akọrọ, na akpị mgbada (nke nwere ike ibute ọrịa lyme) na ịta ata ...
mbadamba 5 pimobendan
Ọgwụgwọ ọrịa nkụchi obi nke nkịta NJIKE ọ bụla mbadamba ihe ọ bụla nwere pimobendan 5 mg Ngosipụta maka ịgwọ ọrịa nkụchi obi nke nkịta sitere na cardiomyopathy ma ọ bụ ezughi oke valvular (mitral na/ma ọ bụ tricuspid valve regurgitation). ma ọ bụ ọgwụgwọ nke ọrịa cardiomyopathy gbadara agbagoro (asymptomatic na mmụba na njedebe ventricular end-systolic na end-diastolic) na Doberman Pinschers na-eso nyocha echocardiographic nke ca ...
torasemide mbadamba 3mg
Maka ọgwụgwọ nke akara ụlọ ọgwụ, gụnyere edema na mgbaze, nke metụtara nkụchi obi obi na nkịta Nhazi: Mbadamba ụrọ ọ bụla nwere 3 mg nke torasemide Indications: Maka ọgwụgwọ nke akara ụlọ ọgwụ, gụnyere edema na mgbapụta, metụtara nkụda obi nkụda mmụọ. Nchịkwa: ojiji ọnụ. Enwere ike iji mbadamba UpCard na nri ma ọ bụ na -enweghị ya. Usoro a tụrụ aro nke torasemide bụ 0.1 ruo 0.6 mg kwa kilogram ahụ, otu ugboro n'ụbọchị. Ọtụtụ nkịta na -akwụsi ike na dose o ...
mbadamba 10 nke furosemide
Ọgwụgwọ ascites na edema, ọkachasị ejikọtara na ezughị oke obi na nkịta NJIKỌTA: Otu mbadamba 330 mg nwere furosemide 10 mg Indications ọgwụgwọ ascites na edema, ọkachasị ejikọtara ya na nchịkwa nchịkwa ezughi oke nke obi. 1 ruo 5 mg furosemide/n'arọ dị arọ kwa ụbọchị, ya bụ, mbadamba ½ ruo 2.5 kwa kilogram ise maka Fumide 10mg, otu ugboro ugboro abụọ kwa ụbọchị dabere n'ịdị ike nke edema ma ọ bụ ascites. Nlereanya maka ọgwụ ezubere iche nke 1mg/kg kwa ...
Mbadamba Carprofen 50 mg
Mbelata mbufụt na mgbu nke ọrịa musculo-skeletal na ọrịa nkwonkwo na-emebi emebi na njikwa nke mgbu mgbu arụ ọrụ na nkịta / Carprofen Mbadamba ụrọ ọ bụla nwere: Carprofen 50 mg Ntuziaka Mbelata mbufụt na mgbu nke ọrịa mọzụlụ na ọrịa nkwonkwo na-emebi emebi kpatara. Dị ka ịgbaso analgesia parenteral na njikwa mgbu mgbu ịwa ahụ. Ọnụ ego a ga -enye na ụzọ nchịkwa maka nchịkwa ọnụ. Ntinye mbụ nke 2 ka ...
Mbadamba Metronidazole 250 mg
Ọgwụgwọ eriri afọ na eriri afọ, oghere ọnụ, akpịrị na ọrịa anụ ahụ na nwamba na nkịta Metrobactin mbadamba 250 mg maka nkịta na nwamba NKWUKWU 1 mbadamba nwere: Metronidazole 250 mg Ngosipụta ọgwụgwọ ọrịa eriri afọ eriri afọ nke Giardia spp kpatara. na Clostridia spp. (ntụgharị C. perfringens ma ọ bụ C. siri ike). Ọgwụgwọ ọrịa nke akụkụ urogenital, oghere ọnụ, akpịrị na akpụkpọ nke nje anaerobic dị mkpa (dịka Clostridia spp.) Nwere ike ibute ...
Enro ﬂ ox 150mg mbadamba
Enrofox 150mg Tablet Ọgwụgwọ ọrịa nje nke alimentary, akụkụ iku ume na urogenital traktị, akpụkpọ ahụ, ọnya ọnya ọnya abụọ na otitis externa Nkọwa: Enro -ox 150mg Mbadamba ụrọ na -egosi maka njikwa nke ọrịa ndị nje na -ebute enro -oxacin. ọ bụ maka iji nkịta na nwamba. MGBE: A ga-akpachara anya jiri ọgwụ klaasị klaasị nwere anụmanụ nwere ọrịa Central Nervous System (CNS) ma ọ bụ enyo enyo. N'ọnọdụ dị otú a ...
Cefalexin 300 mg nke mbadamba
Maka ọgwụgwọ ọrịa akpụkpọ anụ na ọrịa urinary tract na nkịta, otu mbadamba nwere: ihe na-arụ ọrụ: cefalexin (dị ka cefalexin monohydrate) ……………………………………………. Ihe ngosi 300 mg maka ojiji, na -akọwapụta ụdị ebumnuche maka ọgwụgwọ ọrịa akpụkpọ anụ (gụnyere pyoderma miri emi na nke dị elu) nke ụmụ nje kpatara, gụnyere Staphylococcus spp., Nke nwere ike ibute cefalexin. Maka ihe ...
Mbadamba ụrọ Marbofloxacin 40.0 mg
Ọgwụgwọ ọrịa anụ ahụ na anụ ahụ dị nro, ọrịa urinary tract na ọrịa akụkụ okuku ume na nkịta Ihe na -arụ ọrụ: Marbofloxacin 40.0 mg Ngosipụta maka ojiji, ịkọwapụta ụdị ebumnuche n'ime nkịta Marbofloxacin gosipụtara na ọgwụgwọ nke: - ọrịa anụ ahụ na anụ ahụ dị nro (pyoderma akpụkpọ anụ). , impetigo, folliculitis, furunculosis, cellulitis) nke ụdị nje nwere ike ibute. - ọrịa urinary tract (UTI) kpatara site na ụdị nje nwere ike ibute ọrịa ma ọ bụ ...
Firocoxib 57 mg+Firocoxib 227 mg mbadamba
Maka ahụ efe nke mgbu na mbufụt metụtara ọrịa ogbu na nkwonkwo na nkịta na mgbu na ịwa ahụ na mbufụt metụtara anụ ahụ dị nro, ịwa ahụ orthopedic na eze na nkịta. Agba aja aja, gbaa gburugburu, convex, mbadamba mbadamba ihe. Ihe ngosi maka iji, na -akọwapụta ụdị ebumnuche maka enyemaka nke mgbu na mbufụt metụtara osteoarthritis na nkịta. Maka enyemaka nke post-operat ...
Amoxicillin 250 mg +Clavulanic acid 62.5 mg mbadamba
Ọgwụgwọ ọrịa anụ ahụ, ọrịa urinary tract, ọrịa akụkụ okuku ume, ọrịa afọ eriri afọ na ọrịa nke oghere ọnụ na nkịta MGBE mbadamba ihe ọ bụla nwere: Amoxicillin (dị ka amoxicillin trihydrate) 250 mg Clavulanic acid (dị ka potassium clavulanate) 62.5 mg Ntuziaka maka iji, na -akọwapụta ebumnuche ebumnuche ọgwụgwọ ọgwụgwọ ọrịa na nkịta nke nje na -emetụta amoxicillin yana clavulanic acid, ọkachasị: ọrịa akpụkpọ (gụnyere ...
fipronil 0.25% ịgba
FIPRONIL 0.25% SPRAY Maka ọgwụgwọ na mgbochi nke ure na akọrọ.Ihe mmerụ ahụ na ịchịkwa akpịrị na akọrọ dermatitis na nkịta. MGBE: Fipronil ....... Akwadola gị ka Fipronil fesa, echiche pụrụ iche na njikwa akpịrị na-adịte aka maka nkịta na nwamba. Fipronil 250ml bụ ihe na-adịghị agba ikuku na-efe efe ...